दोलखाका स्वास्थ्य संस्थामा आएन सुरक्षा सामाग्री, डाक्टर भन्छन्ः ‘संक्रमितको कसरी उपचार गर्ने ?’ - Edolakha
दोलखाका स्वास्थ्य संस्थामा आएन सुरक्षा सामाग्री, डाक्टर भन्छन्ः ‘संक्रमितको कसरी उपचार गर्ने ?’
6 months ago/Wednesday, March 25th, 2020
दोलखा, १२ चैत्र ।
कोरोना भाईरसको त्रास फैलिरहेका बेला दोलखामा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सुरक्षाको उपकरण पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।
कुनै शंकास्पद विरामी भेटिएमा उसको घाँटीको स्वाब परिक्षणका लागि ओसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएपनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिभ ईक्युपमेन्ट (पिपिई) पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको हो । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त शर्माले पनि जिल्लामा ज्वरो नाप्ने मेसिन (थर्मल गन्) त्यति धेरै अभाव नभएपनि पिपिईको भने अभाव भएको बताउनुभयो । ज्वरो नाप्ने थर्मल गन् भने स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्लाका निजि अस्पताल तथा केही स्थानीय सरकारले समेत खरिद गरि ल्याईसकेकाले त्यतिधेरै अभाव नभएपनि पिपिई सेट अभाव भएको उहाँको भनाई छ । पिपिई सेट विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुने भएकाले बजारमा नपाउने र नेपाल सरकार आँफैले बनाउन समेत नमिल्ने हुँदा समस्या भएको प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो ।
जिल्लामा अत्यावश्यक औषधी, आईसोलेसन लगाएतको व्यवस्था भएपनि स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोटेक्टिभ उपकरणको मुख्य अभाव भएको उहाँको भनाई छ । यद्धपी सरकारले चिन सरकारसँग माग गरेकाले केही समयपछि पिपिई सेट समेत पर्याप्त मात्रामा आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक उपकरण माग गर्नकै लागि स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका प्रमुख केन्द्रीय मन्त्रालयसम्म पुगेपनि जिल्लामा थप उपकरण आउन सकेको छैन । आफु केन्द्रीय मन्त्रालय पुगेपनि संघीयताका कारण प्रदेश सरकार हुँदै जिल्ला आउने भएकाले अहिले आईनसकेको र प्रदेश सरकारले पठाउने बताएको स्वास्थय कार्यालय दोलखाका प्रमुख विभुकुमार झाले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाईरसको त्रास फैलिरहेका बेला दोलखामा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सुरक्षाको उपकरण पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको छ । जिल्लामा निर्माण गरिएका आईसोलेसन वार्डहरु कुनै व्यक्तिलाई कोभिड १९ को शंका लागेमा उसको स्वाब परिक्षण गरि रिपोर्ट नआउन्जेल सम्मको समयमा राख्ने खालको मात्रै भएकाले न्युनतम आवश्यकताका उपकरणहरु भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण भने नभएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । पिपिई सेट विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुने भएकाले बजारमा नपाउने र नेपाल सरकार आँफैले बनाउन समेत नमिल्ने हुँदा समस्या भएको हो ।
यद्धपी, जिल्लालाई कति उपकरण आवश्यक पर्छ र प्रदेश सरकारले कति पठाउँछ भन्ने स्वास्थ्य कार्यालयसँग नै एकिन तथ्यांक छैन । हाल जिल्लामा दुई वटा पिपिई सेट भएकोमा दुवै सेट प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र अर्थात प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल पठाईसकिएको प्रमुख झाले बताउनुभयो । तर, स्वास्थय कार्यालयले पठाएको एक सेट पिपिई प्रयोग भईसकेको छ । चरिकोट अस्पतालमा सोमबार फिवर क्लिनिक सञ्चालन गरिएकाले एक सेट पिपिई सोमबार नै प्रयोग भईसकेको र एउटा मात्रै बाँकी रहेको न्याय हेल्थ नेपालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. विनोद दङ्गालले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखामा निर्माण गरिएका आईसोलेसन वार्डहरु कुनै व्यक्तिलाई कोभिड १९ को शंका लागेमा उसको स्वाब परिक्षण गरि रिपोर्ट नआउन्जेल सम्मको समयमा राख्ने खालको मात्रै भएकाले न्युनतम आवश्यकताका उपकरणहरु भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण भने नभएको डा.दंगालको भनाई छ । उहाँका अनुसार दोलखाका आईसोलेसन वार्डमा बेडसिट, औषधी लगाएत न्युनतम आवश्यकताका उपकरण मात्रै रहेको छ । अत्यावश्यक उपकरण नभएकाले तत्काल कुनै शंकास्पद विरामी आएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खटिन समस्या हुनेछ ।
जिल्लालाई कति उपकरण आवश्यक पर्छ र प्रदेश सरकारले कति पठाउँछ भन्ने स्वास्थ्य कार्यालयसँग नै एकिन तथ्यांक छैन । हाल जिल्लामा दुई वटा पिपिई सेट भएकोमा दुवै सेट प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र अर्थात प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल पठाईसकिएको प्रमुख झाले बताउनुभयो । तर, स्वास्थय कार्यालयले पठाएको एक सेट पिपिई प्रयोग भईसकेको छ ।
जिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डाक्टर राकेश श्रेष्ठले पनि न्युनतम आवश्यकताका उपकरण भएपनि पिपिई लगाएतका अत्यावश्यक सबै सामाग्री नभएको जानकारी दिनुभयो । जिरी अस्पतालमा जिरी नगरपालिकाले दुई वेड क्षेमताको आईसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको छ । सो वार्डमा हाल दुई वटा वेड, स्वासप्रश्वासको लागि अक्सिजन, ज्वरो नाप्ने थर्माेमिटर, औषधी, स्यानेटाईजर लगाएतका न्युनतम आवश्यकताका सामाग्री रहेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिरी अस्पतालसँग दुई थान ज्वरो नाप्ने थर्माेमिटर (थर्मल स्क्यानर) रहेको छ । जिरी नगरपालिकाले पाँच वटा ज्वरो नाप्ने मेसिन माग गरेकोमा एउटा आएको र नगरपालिकाले हेल्थ डेस्क स्थापना गरि चेकजाँच सुरु गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यद्धपी जिल्ला स्वास्थय कार्यालय दोलखाका प्रमुख झाले भने जिल्लामा हाल न्युनतम आवश्यकताका सामाग्री भएको र शंकास्पद विरामी समेत नभेटिएकाले आँत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभयो । जटिल आवस्था आईपरेमा तत्काल सामाग्री उपलव्ध हुने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारबाट चाँडै उपकरणहरु आउने भएकाले समस्या नहुने दावि गर्नुभयो ।
फाइल तस्विरः कोरोना संक्रमित उपचारका लागि सुरक्षाका सामाग्री सहित खटिएका चिकित्सकहरु
१२ चैत्र, २०७६ । ८ः१५ बजे प्रकाशित
VIEWS: 4720 पटक हेरीएको